Deg Deg: Afar dhaqtar oo saddex ay u dhasheen dalka Suuriya oo goor dhow lagu diley Siinka dheer |
Deg Deg: Afar dhaqtar oo saddex ay u dhasheen dalka Suuriya oo goor dhow lagu diley Siinka dheer
Arbaco, December 18, 2013 — Waxaa goor dhow deegaanka Siinka Dheer oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho lagu diley 4 dhaqtar oo saddex kamid ahi ay ahaayeen dhaqaatiir u dhalatay dalka Suuriya, halka midka afraadna uu Soomaali ahaa.
Kooxo hubeysan ayaa lagu soo warramayaa in ay jidka u galeen gaari dhaqaatiirtan sidey xilli ay ka tageen magaalada Muqdisho, islamarkaana ay ku sii jeedeen isbitaal ay ka hawl-galayeen oo lagu magaabo Fiqi, kaas oo ku yaalla isla deegaanka Siinka Dheer.
Kooxda dilka geysatey oo aan weli si rasmi ah haybtooda loo aqoonsan ayaa durbadiiba goobta ka baxsaday, waxaana jira warar sheegaya in ay diriiska ciidamada dowladda ku lebisnaayeen.
Dhowaan ayey ahayd markii sidan oo kale magaalada Muqdisho loogu toogtey macallimad u dhalatay dalka Uganda, taas oo wax ka dhigi jirtey Jaamacadda Soomaaliya oo kamid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho.
Faah faahin ku saabsan dilka dhaqaatiirta dib ayaan idiinka soo gudbin doonnaa…